आज देशभर भारी वर्षा हुने मौसम विभागको अनुमान, सचेत रहन सुझाव::kamananews
आज देशभर भारी वर्षा हुने मौसम विभागको अनुमान, सचेत रहन सुझाव
काठमाडाैँ। जल तथा मौसम विभाग अन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान शाखाले बाढीको खतराबाट सचेत हुन आग्रह गरेको छ ।
मनसुन सक्रिय भएकाले देशभर पानी पर्ने हुँदा चुरे तथा महाभारत श्रंखलाका खोला तथा नदीमा बाढी आउने सम्भावना रहेकाले सचेत रहन आग्रह गरेको हो । शाखाले नदी आसपासका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गर्दै सम्भव भए बासस्थान सर्न समेत आग्रह गरेको छ । शाखाका अनुसार गोरखा, धादिङ, लमजुङ तथा कास्कीका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले बाढी आउने जोखिम छ ।
विशेष गरी बागमती र नारायणी नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दा सचेत हुनु पर्ने देखिएको छ । यस्तै कन्काई, कोशी, कमला, पश्चिम राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकालीसहितका सबै मुख्य नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएको छ । मौसमविद्का अनुसार गत वर्ष (मनसुन) को तुलनमा यो वर्ष मनसुनको अवधि लामो हुने तथा औसत केही वढी पानी पर्ने छ । गत मनसुनमा १ हजार ३९१ मिलिलिटर पानी परेको थियो भने यो वर्ष १५ सय मिलिलिटर पानी पर्ने अनुमान छ । ﻿
मोवाइलको लक बिर्सेर तनावमा हुनुहुन्छ ?यसरी खोल्न सकिन्छ !
समयनुसार विकास र प्रबिधिको पनि विकास हुदै छ | संचारको दुनियामा दिन प्रतिदिन तिब्र विकास भैरहेको छ | स्मार्टफोन चलाउनेहरु प्राय सबैले आफ्नो मोबाइलमा लक सिस्टम राखेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ उनीहरु आफ्नो फोनको लक खोल्ने पासवर्ड...
१ वर्षभित्रै फोर-जी र ४ शहरमा फाइभ-जी सेवा विस्तार हुने !
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलाई फोरजी विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारले नेपाल टेलिकमको फोर-जी विस्तारमा परेको गाँठो फुकाएको छ । टेण्डर नै विवादमा परेपछि हाल फोर-जी विस्तारको योजना अलपत्र छ । सरकारले हालै एक...
तपाई आइफोने चलाउनु हुन्छ?सचेत हुनुहोस गोजीमै पड्किन सक्छ!
अमेरिकाको ओहियोमा एकजना आइफोन प्रयोगकर्ताले आफ्नो गोजीमा राखेको आइफोन एक्स एस म्याक्स पडि्कएको छ । ओहियोमा बस्ने जोस हिल्लार्डले गत डिसेम्बर १२ मा आफ्नो गोजीमा रहेको आइफोन पड्किएर आगो लागेको दाबी गरेका छन् । गोजीमा रहेको...
आज देखि बढ्ने भनिएको इन्टरनेटको मूल्य तत्काल नबढाउने…..
१५ पुस, काठमाडौं । सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने आश्वास दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा तत्काल मूल्य नबढाउने भएका छन् । सम्झौता अनुसार नै दुरसञ्चार नियमवाली संशोधन गर्ने सरकारको आश्वासनपछि व्यवसायी पछि हटेका हुन्...
आउँदैछ विश्वकै पहिलो ६ वटा क्यामरा भएको नोकिया स्मार्टफोन
पछाडिको भागमा ५ वटा क्यामरा भएको विश्वकै पहिलो स्मार्टफोन आउँदो जनवरीमा लञ्च हुने भएको छ । नोकिया ब्राण्डको स्वामित्व लिएको कम्पनी एचएमडी ग्लोबलले नोकिया नाइन प्योर भ्यू नामक स्मार्टफोन ल्याउने योजना बनाएको बताइएको छ । जनवरी...
एक वर्षसम्म फेसबुक नचलाउँदा १ हजार डलर पुरस्कार,
आफ्नो फेसबुक अकाउन्टलाई एक वर्षसम्म निस्क्रिय पार्नका लागि एकजना फेसबुक प्रयोगकर्ताका लागि औषतमा १ हजार डलर दिनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । प्लस वन जर्नलमा छापिएको शोधमा फेसबुकको बजार मूल्यको आधारमा प्रयोगकर्ताको मूल्यांकन गरिएको थियो...
तीव्र गतिको इन्टरनेट भएका देशहरु, कुन कुन हुन् ? नेपालको अवस्था कस्तो ?
विश्वको इन्टरनेट स्पिड पछिल्लो समयमा वृद्धि हुँदै गएको रिपोर्टले देखाएको छ । स्पिडटेष्ट डट नेटले प्रकाशित गरेको सन् २०१८ को विश्वको इन्टरनेट गतिको प्रतिवेदनले विश्वमा मोबाइल तथा फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड दुवै इन्टरनेटको डाउनलोड तथा अपलोड...
सावधान ! यी हुन् सबैभन्दा धेरै ह्याक भएका कमजोर पासवर्ड
यो वर्ष सन् २०१८ मा सबैभन्दा धेरै ह्याक भएका वा सर्वाधिक कमजोर पासवर्डको खुलासा भएको छ । साइबर सेक्योरिटी फर्म स्प्लास डाटाले यसको खुलासा गरेको हो । वर्षको सबैभन्दा कमजोर पासवर्डको सूचिमा १२३४५६ सबैभन्दा अगाडि रहेको...
सामसुङको ग्यालेक्सी एस १० फेब्रुअरीमा लञ्च गर्ने,के के छन् त यसका विशेषता :
सन् २०१९ मा बजारमा ल्याउने आफ्नो नयाँ फ्लागशीप स्मार्टफोनको तयारी सामसुङले गरिरहेको छ । पछिल्ला केही हप्तायता सामसुङ ग्यालेक्सी एस १० का विषयमा लगातार विभिन्न खाले समाचारहरु आइरहेका छन् । सामसुङले आगामी फेब्रुअरी महिनामा हुने...
आफु मरेको १ मिनेट सम्म आफैँलाई थाहा हुने एक तथ्य सार्बजनिक
मानव मस्तिष्कले मृत्यु भएको केही मिनेटसम्म थाहा पाउने भन्दै केही वैज्ञानिकहरुले पुष्टि गरेका छन् । जब कि कसैको शरीर मृत्यु भएको छोटो समयसम्म आफू मरिसकेको भन्ने सूचना पाउने उनीहरुले पत्ता लगाएका हुन् । अमेरिका र...